Ukubhloga kwiDummies Cheat Sheet
Ngu-Amy Lupold Bair
Xa uqala ibhlog entsha, esinye sezigqibo zakho ezibaluleke kakhulu kukukhetha ukuba yeyiphi isoftware ebhloga oza kuyisebenzisa. Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba luhlobo luni lweblogger oya kuba yiyo. Ngaba kukho i-niche ethile enokuthi ilingane kakhulu ukuthelekisa umdla wakho kunye nobuchule? Enoba ungumblogi omtsha okanye ujonge ukutshintshela amaqonga okubhloga, uluhlu lwezixhobo zebhlogi kunye nezinto onokuzifumana apha zinokukunika ithuba lokuqala kukhangelo lwakho lwesoftware yebhlog kunye nomdlalo webhlog niche.
© NguTierneyMJ / Shutterstock.com
Ukukhetha iBlogging Software
Xa ukhetha ibhlog usebenzisa i isingathwe inkonzo yeblogi, awudingi ukuba nexhala malunga nobuchwephesha besoftware konke konke. Unokugxila kwisihloko seposti yakho yebhlog elandelayo, endaweni yokuba umisela njani umncedisi wewebhu. Sebenzisa isoftware yokubloga ebanjelweyo, ungena kwisixhobo sokuhlela, ubhale iposti, ucofe uPapasha iqhosha, kwaye ungene.
Ibhonasi eyongezelelweyo: Ukuba ukhetha isoftware yeblogi, awunakukhathazeka ngokusingathwa kwewebhu-inkampani yesoftware ikunika le nkonzo!
Indawo yokulwa Amaxabiso aqala kwi- $ 12 ngenyanga ngenkonzo yonyaka
Uhlobo lwePad Amaxabiso aqala kwi- $ 8.95 ngenyanga
Luhlobo luni lweBlogger oyenzayo Ufuna ukuba?
Siyavuyisana nawe, uthathe isigqibo sokuba ufuna ukungena kubhlog kunye nokuntywila kulonwabo, umdlalo omtsha wokubhloga! Kukho amanyathelo amaninzi ekufuneka elandelwe kunye neenkqubo zokuqonda ukuba unokuziva ungoyiki. Endaweni yokutsiba iinyawo kuqala ekukhetheni iqonga lokubhloga okanye uyile ilogo entle, thatha umzuzwana ukuba wazi ezinye zeentlobo zeebhloko ezikhoyo. Ngaba ufumene into ekusebenzela yona? Nalu ushwankathelo lweentlobo zebhlog ezaziwa kakhulu:
Umzali: Enye yezona ndawo zidumileyo zebhlogi, le niche iyaqhubeka nokukhula ngokuxhuma kwaye ibandakanya bobabini umama notata ababhlogi bebhala ngayo yonke into ukusuka ebomini njengomzali ukuya kwimveliso yamva nje kunye neyona mikhulu yabantwana.
Izinto endizithandayo: Ngaba uyingqondi yokuluka? Mhlawumbi uye waba yingcali ngokulele. Nokuba yeyiphi into oyithandayo, kutheni ungaqwalaseli ukubhloga malunga namava akho kwaye ujoyine indawo enkulu yezinye iibhlog ezenza okufanayo?
Itekhnoloji: Ithekhnoloji ukubhloga yinto enkulu kakhulu- intwana ye-oxymoron- kuba, ngokulula, abantu babhenela kwimithombo ye-Intanethi ukuze bafunde ngetekhnoloji yakutshanje. Ayithintelwanga yimihla yokupapashwa kunye nexesha elibekiweyo njengemithombo yoshicilelo, iibhlog zetekhnoloji zikwimeko yokuqhekeza iindaba zetekhnoloji, zihlala zikwazi ukubonelela abafundi bazo ngezona zamva nezona zibalaseleyo.
Ezopolitiko: Ukuba uziva unomdla kwezopolitiko kwaye ungakhathali ukuzibandakanya kwingxoxo-mpikiswano enkulu, ukubhloga kwezopolitiko kunokuba kuwe. Lungiselela ukukhulisa ukufundwa kwakho ngokukhawuleza kwaye uphendule kumagqabantshintshi rhoqo ukuba uthatha eli kutsiba kwihlabathi lokubloga kwezopolitiko!
Iindaba: Ngaba uneliso leendaba kwaye unomdla wokwabelana ngezo ndaba ngendlela eyahlukileyo nenomdla? Nangona ngokuqinisekileyo ungafuni ukuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde Uph Uph ngoko ng ng ng ng ng ngxa linye elinye elinye elinye elinyeakali elinye neliliala ukuba libe lelona lifanelekileyo.Nangona awufuni ukuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde ke ng ng ng ng linye na elinye elinye elinye elinye elinye elinye elinye nel lokuba nelli elinye nelinyealiyilo, ngapha koko ungafuni ukuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde upiridza lo mfanekiso, ubonise ukuba ufuna ulwazi oluthe vetshe malunga nesihloko esithile okanye uxele iindaba ngesihluzi sehlaya.
Ubhala: Uyakhumbula xa wawukwishumi elivisayo kwaye ubhala phantsi yonke ingcinga yakho, ithemba kunye nephupha lakho? Ngoku ungayenza loo nto kwi-intanethi kwaye wabelane ngayo nehlabathi! Ijenali zebhlogi zihlala zabelana ngokubonakalayo kubomi obunenkalipho, okhaliphileyo, kwaye obunokuchazeka ngokubalaseleyo kubafundi babo.
Ukujongana nokuPhila ngokuLondolozayo: Mhlawumbi ungukumkanikazi okhuphayo kusapho lwakho okanye kwidolophu yakho. Mhlawumbi ufumene iindlela zokuyila zokuguqula intsalela ibe sisixhobo sokutya. Isivumelwano kunye nolondolozo lokuhlala kwabantu kublogi kuqhume kule minyaka imbalwa idlulileyo kwaye kuzisa izigidi zokujonga iphepha kwiintsapho ezinethemba lokugcina imali emva kokundwendwela ibhlog.
I-DIY kunye noyilo: Njengonoblogi abaphilayo abangenabungozi, i-DIY kunye neebhlog zebhlogi zizisa izakhono zabo ezintle kwi-Intanethi, bafundise abafundi ngobuchule babo kwaye babafundise kwaye babakhuthaze ngendlela yokwenza okufanayo ekhaya.
ipilisi etyheli enama-2632
Unyango olulungileyo lomqala obuhlungu
indlela yokufumana iialbhamu ekwabelwana ngazo
Ungaphilisa njani umnwe odibeneyo
Kuthatha ixesha elingakanani ukuhlamba i-niacin?